LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Ajaanibta - Qunsuliyada Fiyatnaamiis - Qeybta 3 - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
Continued lasii wado qeybta 2:
The shibannada taasi waxay ka dhacdaa Vietnamese waxay ku yaalliin hoosta liiska orthography ee Fiyatnaamiis oo leh dhawaaq codka halista ah dhinaca midigta.
Kontaroolka Fiyatnaamiiska (Xigasho: Shirkadda La Xisaabtanta Lac Vietnam)
Qaar ka mid ah dhawaaqyada codka waxaa lagu qoray hal warqad oo keliya (sida “p"), dhawaaqyada kale ee loo yaqaan 'consonant dhawaaq' ayaa lagu qoraa sharaf-xaraf laba-xaraf leh (sida “ph"), iyo kuwa kale waxaa lagu qoray wax kabadan hal xaraf ama digraph (Joojinta velar waxaa loo qoraa si kala duwan sida “c","k", Ama"q").
Shaxanka hoose ayaa muujinaya faahfaahin waana laga yaabaa inay kaa caawiso inaad si fudud wax u fahanto.
Fiyatnaamiis siska indhatiro
Waxaa jira 17 kononono oo keliya sida hoos ku taxan:
Kontaroolka Fiyatnaamiiska hal mar (Source: IRD Tech Tech cusub)
Vietnamese shibannada kooxo
Waxaa jira 11 kayd kooxaha:
Kooxayaasha Fiyatnaamiiska ee Fiyatnaamiiska (Isha: Shirkadda La Xisaabtamo ee Lac Vietnam)
Viitnamese shibannada ugu dambeeya
Waxaa jira 8 qunsuliyadaha kama dambeysta ah:
Shirarka ugu dambeeya ee Fiyatnaamiiska (Isha: IRN Tech Tech)
Farqiga u dhexeeya labada dhawaaq - K & Kh, Ng & Ngh
Waa lagama maarmaan in isbeddel lagu sameeyo kuwan laba dhawaaq:
"K"&"kh"Waa labo ka mid ah astaamaha loodhaafka luuqada Fiyatnaamiis. “K"Waxaa la soo saaray fortis iyo rajo la'aan. Waxay la mid tahay "c"Gudaha cat. In Luqada vietnam waxay la mid tahay “c"Iyo"q”. Laga yaabee in mid ka mid ereyada ugu caansan ka bilowdo “kWaa "xun"Oo macnaheedu yahay"Jalaato"Iyo"cawoo"Oo macnaheedu yahay"nacnac". "Kh"Waxaa soo saaray lenis codka aan maqal lahayn oo doodorelar spirant ah. Waxa ugu caansan 'kh"Ereygu waa"không"Oo macnaheedu yahay"maya"Ama"maInkasta oo ay jiraan yar macnaha guud sida sidoo. "Khuu"Oo macnaheedu yahay"xoog"Iyo"caafimaadWaa eray kale oo caan ah. Meelaynta “khỏe không"Ka dib tixraaca shaqsiyeed waa in wax laga weydiiyaa caafimaadka qof kale - macno ahaan:"ma fiicantahay"Sida ku jirta"maxaa dhacay?"Sidoo kale wakhtiyadan cunnada soonka ah, shiillada kalluunka loo yaqaan 'fyl fren' waxaa loo yaqaan 'maxaa dhacay"Oo macnaheedu yahay"shiil baradho".
Farqiga u dhexeeya K iyo Kh (Xigasho: Shirkadda Lacagta ee La Xiriira Lac Lac)
Ng iyo Ngh
Dhawaaqaas ng iyo ngh samee Vietnamese waa fog codka ugu adag ee reer galbeedku u sameeyaan. Ng iyo ngh si fudud ugu dhawaaqa ugu dambeeya "Boqor"Ama"orodkii"(ilaa iyo intaadan adkayng/ dhawaq dhamaadka). Dhibaatadu waxay kacdaa goorta ng or ngh yimaado bilowga eray, sida magaca qoyska oo la wadaago Nguyễn si cad u muujiya. Halkan, af-hayuhu waa inuu go'doomiyaa /ŋ/ dhawaq, kuwaas oo xitaa qaamuusyo badan oo reer galbeedku aysan aqoonsanayn tilmaamaha ay ku dhawaaqayaan. (Kuwa iyagu u muuqda inay matalaan sidii /ng/.) Casharkaan wuxuu kaa caawinayaa inaad ugu yaraan ku dhawaaqdo /ŋ/ cod fiican ugu filan dhagaystaha hooyo.
Hal shay oo ay tahay inaad ogaysiis ka qaadatid waa isku darka shaxdaan kor ku xusan Ng/ ngh leh shaqal. Hoos ka eeg faahfaahin si faahfaahsan:
Farqiga u dhexeeya Ng iyo Ngh (Xigasho: coviet.vn)
Ngh kaliya ayaa lagu dari karaa shaqalaha ay ku bilaabmayaan i, e, ê.
Ng isku dari karaa shaqalaha lagu bilaabay a, o, ơ, ô, u, ư.
Ka sokow, Vietnamese wuxuu leeyahay labo cod oo kale (g/ gh) kuwaas oo dhammaantood loogu dhawaaqo sida /g/, shibbaneyaashan, waxa kale oo jira sharci ah isku xidhka shaqallada.
- gh kaliya lagu dari karaa shaashadda lagu bilaabay e, ê, i.
- g waxaa lagu raaci karaa shaqalka bilawgiisa a, o, ơ, ô, u, ư.
* g sidoo kale waa la raaci karaa i laakiin kiiskan waxaa loogu dhawaaqi doonaa sida /j/, eg waa gii.
… Sii wad qeybta 4…
(Booqday jeer 3,499, booqashooyinka 8 maanta)
Views Views: 2,972
← LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiiska iyo Ajaanibta - Qeybta 2
LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiiska iyo Ajaanibta - Wadahadalka: GREETING - Qeybta 5 →
Booqashada Maanta: 276
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,197
Guud ahaan Wadarta: 286,092